Kaadh Qaybinta Codbixiyeyaasha Oo Berito Ka Bilaabmaysa Goboladda Sool iyo Sanaag – HormoodNews
Kaadh Qaybinta Codbixiyeyaasha Oo Berito Ka Bilaabmaysa Goboladda Sool iyo Sanaag
08/11/2017 10:57 pm by HormoodNews Views: 8
Laascaanood (HMN): Kaadh qaybinta codbixiyeyaasha ayaa Sabtida berito si rasmiya uga bilaabmaysa goboladda Sool iyo Sanaag, sida ay Khamiistii doraad magaaladda Laascaanood kaga dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland.
Munaasibad ay Khamiistii shalay komishanka doorashooyinku ku daah-furayeen shaacinta kaadhka codbixiyaha ee goboladda Sool iyo Sanaag ka bilaabmaysa Sabtida beri oo bisha August tahay 12-ka, ayaa lagu qabtay magaaladda Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Waxaana ka qayb galay guddoomiyaha gudiga doorashooyinka iyo xubno ka tirsan komishanka guud ee doorashooyinka qaranka Somaliland. Sidoo kale waxaa xafladaasi goob joog ka ahaa hogaamiyeyaasha saddexda xisbi qaran ee UCID, Kulmiye iyo Waddani, wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo masuuliyiin kale.
Gobolka Sool ayaa goobihiisa codbixintu dhan yihiin 177-goobood. Sidoo kale gobolka Sanaag ayay isna goobihiisu yihiin 174-goobood. Isu-gaynta tiradda guud ee goobaha labadan gobol ay komishanka doorashooyinku u qorsheeyeen in kaadh qaybintu ay ka dhacdo ayaa noqonaya 351-goobood.
Gobolka Sool ayaa ka kooban afar degmo doorasho oo kala ah degmadda Laascaanood, degmadda Caynaba, degmadda Xudun iyo degmadda Taleex. Halka gobolka Sanaag-na ay qaybinta kaadhka codbixiyaha ka dhici doonto afarta degmo doorasho ee degmadda Ceerigaabo, Ceel-Afweyn, Badhan iyo degmadda Garadag.
Wareega hore ee kaadh qaybinta ayaa magaalooyinka Laascaanood iyo Ceerigaabo ka socon doonta 12-ka ilaa 18-ka bishan August. Iyadoo magaalooyinka Badhan, Ceel-Afweyn, Garadag, Caynaba, Xudun iyo Taleex, wareega hore ay ka socon doonto 12-ka ilaa 16-ka bisha. Sida ay sheegeen komishanka doorashooyinku.
Kaadhka codbixinta waxaa qaadan kara oo keliya dadkii hore isku diiwaangeliyay ee haysta waraaqdii ay komishanku siiyeen. Waxaana looga dan leeyahay in kaadhkan lagu codeeyo doorashadda madaxtooyadda Somaliland ee la filayo in ay dalka ka qabsoonto 13-ka bisha November ee sanadkan.
Qaybinta kaadhka codbixiyeyaasha ee ka bilaabmaysa goboladda Sanaag iyo Sool, waxaa ka hawli-geli doona shaqaale tirro badan, oo isugu jira shaqaalaha komishanka doorashooyinka, wakiiladda xisbiyadda siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee ciidamadda.
Isku soo wada duuboo, goboladan Sool iyo Sanaag ee ay berito ka bilaabmayso qaybinta kaadhka codbixinta ayaa noqonaya labadii gobol ee ugu danbeeyay oo laga qabto bixinta kaadhka codbixiyaha muwaadiniinta u dhashay jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaana hore looga soo qabtay qaybinta kaadhka codbixinta afarta gobol ee kala ah Maroodijeex, Awdal, Saaxil iyo Togdheer.